အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Andreas Tomko ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Andreas Tomko ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
Andreas Tomko အဓိပ္ပာယ်ကို
နာမကိုအမှီ Andreas Tomko နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Tomko ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဓိပ္ပာယ် Andreas ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Andreas ။ ပထမအမည်ကို Andreas ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Andreas ၏ compatibility နဲ့ Tomko
အမညျ၏ compatibility Tomko နာမည် Andreas ။
Andreas မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Andreas အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် Andreas ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Andreas ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Andreas ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Andreas စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Andreas Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Andreas အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: စေတနာစိတ်နှင့်, ရက်ရက်ရောရော, တက်ကြွ, အရည်အချင်း, ဖန်တီးမှု. ရယူ Andreas နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Andreas ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. Ancient Greek and Latin form of အင်ဒရူး. It is also the form used in modern Greek, German and Welsh. ရယူ Andreas ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Andreas: ahn-DRE-ahs (ဂြာမနျတွင်, ဆှီဒငျတွင်), ahn-DRHAY-ahs (ဒတျချြတွင်). Andreas စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Andreas ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Aindrea, Aindréas, Aindriú, Anaru, Ándaras, Ander, Andie, Andor, András, Andraž, အန်ဒ, Andrea, အန်ဒရီ, Andre, ကို Andrei, Andrej, Andreja, Andrejs, Andres, Andreu, အင်ဒရူး, Andrey, Andria, Andrija, Andris, Andrius, Andriy, Andros, Andrus, Andrzej, အန်ဒီ, Antero, Antti, Atte, Bandi, Dand, Deandre, Dre, Drew, Endre, Jędrzej, Ondrej, Ondřej, Tero. ရယူ Andreas အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် Andreas: Hanzl, Van Rooyen, Schmidt, Scarritt, Darr, van Rooyen. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Andreas.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Tomko: Isaac, Randall, Carlos, Scott, Rossana. ရယူ Tomko နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Andreas ၏ compatibility နဲ့ Tomko 79 ဖြစ်ပါသည်. ရယူ Andreas ၏ compatibility နဲ့ Tomko.
Andreas Tomko အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Andreas Tomko Aindrea Tomko Aindréas Tomko Aindriú Tomko Anaru Tomko Ándaras Tomko Ander Tomko Andie Tomko Andor Tomko András Tomko Andraž Tomko အန်ဒ Tomko Andrea Tomko အန်ဒရီ Tomko Andre Tomko ကို Andrei Tomko Andrej Tomko Andreja Tomko Andrejs Tomko Andres Tomko Andreu Tomko အင်ဒရူး Tomko Andrey Tomko Andria Tomko Andrija Tomko Andris Tomko Andrius Tomko Andriy Tomko Andros Tomko Andrus Tomko Andrzej Tomko အန်ဒီ Tomko Antero Tomko Antti Tomko Atte Tomko Bandi Tomko Dand Tomko Deandre Tomko Dre Tomko Drew Tomko Endre Tomko Jędrzej Tomko Ondrej Tomko Ondřej Tomko Tero Tomko